Maruva uye kuseka, achikwira munzira yose | Zhenji
——Makwikwi echitanhatu kukwikwidza kukwikwidza
We wegore wevashandi vanokwikwidza kukwikwidza kweMutungamiri kikkoman zhenji chikafu co., L. yakaitwa Chivabvu 11,2019 mugomo fenglong sezvakarongwa. Vanoda kusvika mazana mana evashandi uye vepedyo nhengo dzemhuri vakapinda mumakwikwi egore.
Kutanga kuri pamutambo na8: 30, kutora mukombe wegore rino kukwira nevashandi vazhinji, mutevedzeri wemaneja, vashandi vekambani, vashandi vevashandi vehofisi, vane mabasa akasiyana sekutengesa, vashandi vekugadzira, kusanganisira vashandi hukama boka remurume nemukadzi, baba nemwanakomana (mukadzi), amai nemwanasikana (mwanakomana) faira, uye mhuri yevatatu, zvisinei nekuti murume kana murume, zera, munhu wese anotarisana nemufaro, nechido.
Pakutanga kwezhizha, miti yePagoda iri mugomo refenglong inotumbuka, uye nzira yematombo iri pasi pemumvuri wemiti izere nemiti. Kana mhepo yavhuvhuvhuvhuvhuvhuvhuta, apo panenge paine maruva akanaka anodonhera pasi. Kupenya kwezuva, kunhuhwirira kwemaruva, kuimba kweshiri uye mvura inorira zvese zvinoita kuti vanhu vagadzikane uye vafare.
Iva nechisikigo uye unakirwe nerunako rwakanaka.Kuti uve nevadikanwa, kuti unakirwe nekudziya kwerudo; Pamwe pamwe nevaunoshanda navo, wana ruzivo rwekunzwisisa kwechikwata; Iva newe uye unzwe mufaro uye kufambira mberi kwemuviri wako nepfungwa.After makwikwi, gumi nevaviri vakundi vakasarudzwa.
Kupindirana mune zvakasikwa, rudo mitambo, inosimudzira hutano uye nekuvandudza yakanaka timu timu ndizvo zvikuru zvinangwa zvekunze zviitiko zvakarongwa nekambani.Mountaineering zviitiko, kwete kungogadzira uye kunatsiridza kuda, ndeimwe yevanonyanya kuzivikanwa vashandi zviitiko.Makwikwi egore rino pamusoro, saka ngatitarisei kune zvimwe zvinonakidza zviitiko zvekunze mugore rinouya.
Nguva yekutumira: Jun-13-2020